Kutheni iNethiwekhi ingekho kuyo yonke iKharityhulamu? | Martech Zone
NgoMvulo, Julayi 21, 2008 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Ngale njikalanga ndiye ndamenywa kwisidlo sasemini kunye nengxoxo Ikholeji yaseIndiana Ikholeji yaseHarrison. I-Indiana iyaziwa ngokuba nezona zikolo zihle kakhulu kwilizwe, nakwihlabathi, kodwa abantu baseHarrison bayaqonda ukuba sikwihlabathi eliguquka ngokukhawuleza. Benza utyikityo olunobukrwada ukuqinisekisa ukuba baya kuhlala ngaphambili kwegophe.
Njengokuba besithetha, ndiye ndabona ukuba kukho isixhobo esinye esibengezelayo esilahlekileyo kule mihla yabafundi. Ukubeka nje, yindlela yokwenza womnatha (kunye nangaphandle kwetekhnoloji). Uninzi lwabafundi luyacelwa ukuba bathathe iiklasi ezinje ngokuThetha esidlangalaleni ngexesha lokuthweswa izidanga, kodwa kunqabile ukuba bafundiswe ngokubaluleka kunye namandla okunxibelelana.
Ndinabahlobo bam abasenyongweni abavakalisa ukuzisola ngokungakhange baye kwiminyhadala yengingqi kwaye bahlala benxibelelana neenkokheli zangaphambili ababesebenza nazo. Kwiminyaka kamva, bafumanise ukuba bayanyamalala kwindawo ebonakalayo kwaye ngoku kufuneka 'babambe' ukuze bafumane umkhondo wokufumana umsebenzi okanye ithuba abalifunayo. Awunakufumana elo xesha kwakhona!
Uninzi lwexesha lam endilichithe ngaphandle komsebenzi wam wokuqala ndilichitha kunxibelelwano. Inethiwekhi ngokuqinisekileyo # 2 kuluhlu lwam lwendlela endilisebenzisa ngayo ixesha lam (# 1 iqhuba kakuhle emsebenzini wam wangoku!). Vala kwi # 3 kukufumana ixesha kunye nethuba lokusebenza kumashishini amatsha okanye kwimisebenzi esecaleni. Kulungile-ndibeka inethiwekhi njengeyona nto iphambili kunokwenza ingeniso yesibini!
Isizathu silula- uthungelwano lukhokelele ekubeni ndifumane umsebenzi wam ophambili kwaye ndikhokele kuwo onke amathuba asekondari. Ngaphandle kwenethiwekhi, ngekhe ndibekhona apho ndikhoyo-kwaye ngekhe ndibenamathuba avulekileyo okuba ndiye apho ndiza kulandela khona.
Unxibelelwano kutyalo-mali. Ngaphezulu, kunokubonakala ngathi uchitha ixesha kunye namandla ukubonelela ngokubonisana, iinkonzo okanye ukwandisa inethiwekhi yakho ngaphandle kweendleko. Nangona kunjalo, ngobu budlelwane ufumana ukuthembela kwabantu kunye nokwakha igunya kumxholo lowo.
Kwimeko apho, ndithathe usuku lomsebenzi namhlanje. Ndichithe imini ndithetha ngeendlela zokunxibelelana nabantu Ikholeji yaseHarrison, ukubonisana Kwindlela eyaBio ekwakheni ubukho babo kwi-Intanethi, kunye nokuya kwi Umrhwebi waseIndiana Intlanganiso yeKomiti eLawulayo-konke kubudlelwane bam benethiwekhi!
Ukuba isikolo sifuna ukuba uthethe esidlangalaleni njengesakhono esifunekayo, kufuneka ootitshala banike unxibelelwano ngqwalaselo olubafaneleyo. Abafundi kufuneka bafundiswe ngokufumana amathuba okunxibelelana, indlela yokujonga kunye nokukhulisa ubudlelwane babo benethiwekhi, ukuhlakulela ubukho kwi-Intanethi- kunye nendlela yokwenza imali kuyo yonke le nto ingentla. Ukuba awukwazi ukugcwalisa ikhosi eqinisekisiweyo ngesihloko, ndijonge phambili ekuboneni iiyunivesithi kunye neekholeji ziphuhlisa iindibano zocweyo ngesihloko.
Ukuba ufuna uncedo malunga noku, zive ukhululekile ukuba Qhagamshelana nam!
tags: imithombo ye infographicsLaura lippay
Ukubhloga kweShishini: Amaqhinga amatsha eNja ezindala
Kunye nabafundi beekholeji zeMySpace kunye neFacebook bakwiindlela ezithile kumda wonxibelelwano lwasentlalweni. Bafuna nje ulwazi ngendlela yokuyisa kwinqanaba elilandelayo.
Ngandlel 'ithile, ewe. Nangona kunjalo, abafundi beekholeji nabo abanamava ekusebenziseni ezi nethiwekhi. Impazamo enye ekugwebeni inokulonakalisa igama lomntu kwiminyaka emininzi ezayo!
Masithembe ukuba siyayibona le kharityhulamu isenzeka kwiminyaka embalwa ezayo.
Jul 22, 2008 ngo-12: 22 AM
Inye kuphela into ekufuneka ndiyenzile kunxibelelwano. Ndikhuselwe kwi-Intanethi kodwa ndingenza ngaphezulu kokudibana kwaye ndibulise noontanga bam kwihlabathi lokwenyani. Kuya kufuneka ndifumane indlela yokuyifaka phakathi kwesikolo nomsebenzi .. kunyanzelekile ukuba ube njalo.
Jul 22, 2008 ngo-6: 12 AM
Ukuba isetyenziswe ngokuchanekileyo, inethiwekhi inamandla amakhulu. Ngokusebenzisa iiforamu kunye ne-facebook, ndiqokelele iqela elincinci elisebenza kunye ekwenzeni iimveliso zebhanki. Kufana nolwahlulo lwabasebenzi, apho umsebenzi wenziwa ngokufanelekileyo. Kananjalo ngokusebenzisa uthungelwano okanye amaqela e-mastermind njengoko abanye beyibiza njalo, amava okufunda asesibini kuye. Ukudibana kunye nokuxoxa ngemiba / iingxaki nabantu babetha nayiphi na incwadi ye-ebook nangaliphi na ixesha lonyaka. Zimbini iisenti zam.
Oktobha 27, 2009 ngo-1: 38 PM
ewe ulungile, ngokokubona kwam zimbalwa kakhulu izinto ezinokutshintsha yonke into kweli hlabathi, enye inethiwekhi kwaye enye ngumsebenzi weqela. , ukuba ur kwinethiwekhi unethuba lokwazi onke amalungu iimvakalelo kunye nezimvo zawo ukuze zonke ezo zimvo + zakho zazi ukuba ulwazi lwe-ur luya kwandiswa kwaye luyafana nelinye lamalungu kwinethiwekhi afumane ithuba lokwandisa ulwazi lwabo becoz ulwazi unamandla ngaphezu kwayo nantoni na,
Enkosi ngokwabelana ngenqaku elimangalisayo elinika ukuba ndibelane ngombono wam apha.
Okt 28, 2009 ngexesha 9:04 AM
Ndicinga ukuba ungayihlaziya iposti yakho kuba i-IBC itshintshe igama layo laba yiKholeji yaseHarrison.
Ndiza kuba nokunye okuninzi endikuthethayo malunga nento endiyixelela abafundi bam malunga nokunxibelelana kwi-Intanethi
Okt 29, 2009 ngexesha 2:00 AM
Ukuhlaziywa kukaTomas! Ndicinga ukuba wenza umsebenzi omangalisayo okhokelela abafundi bakho ngomzekelo kumajelo asekuhlaleni nakwinethiwekhi yoluntu.